Ismacil cumar geele wuxu khatar ku yahay jiritanka somaliland – Docteur Sex – Annuaire de Sexe Gratuit
Ismacil cumar geele wuxu khatar ku yahay jiritanka somaliland
kowda-da bisha Maarso ayaa magaalada Saylac lagu caleemo saaray Ugaas aad loo buunbuuniyey isla markaana kulmiyey siyaasiyiinta iyo madaxda dawladaha iyo dalalka deriska ah masuulyiintooda iyo salaadiintooda iyo Somaliland.
Xafladdan oo ahayd mid ay ka muuqdeen astaamo kala duwan, siyaasad kala duwan iyo qawmiyado kala duwan ayaa markii ugu horreysay loosoo xawilay in Somaliland lagu qabto .Tan iyo shalay wixii magaaladaasi cidlada ah ka dhacayey ayaa soo jiitay dad badan oo markii hore u qaatay in caleemo saarka ugaaska Ciise yahay mid dhaqan ah ,isla markaana xidhiidh fiican u bilaabi doona guud ahaanba Ugaaskaasi iyo madax dhaqameedyada dalalka Itoobiya , Somaliland, Soomaaliya iyo Itoobiya.
Inkastoo aan lasoo koobi karayn xoogga iyo xoolaha beesha Ciise iyo dawladda Jabuuti geliyeen munaasabadda caleemo saarka Ugaaska Beeshaasi ayaa dhinaca waxa la arkayey dareenada kala duwan, damaca kala duwan iyo siyaasadaha kala duwan ee ay kala aaminsan yihiin dalalka ergooyinkoodu ka qaybgaleen xafladda caleemo saarka Ugaaska Ciise, isla markaana laga dhadhansan karayey sida xafladaasi dabada ugu wadataya arrimo ka baxsan caleemo saar madaxdhaqameed aan qaadh gaadh ahayn.
Xukuumadda Jabuuti iyo Somaliland oo iyaga marti loogu ahaa Saylac ayaa martidii ka kala timid dalalka deriska ah isla qaateen in waxa meesha ka dhacay aanay ahayn caleemo saar balse ahayd dhoolatus xukuumadda Ismaaciil Cumar Geelle ku samaynaysay gudaha Somaliland .
.Waa tan koowaade waxa magaaladaasi lasoo dhoobay ciidammo kala duwan oo ay leedahay Dawladda Jabuuti, lebiskoodii iyo hubkoodiina wata .
2.Waxa martidii ka timi dalka Jabuuti laga arkayey iyagoo sita calanka dawladooda isla markaana aan waxba iska saarin soohdinta ay soo dhaafeen iyo dhulka iyo dawladda ay usoo galeen .
3.Waa tan saddexaade dayaca ku dhacay martidii laga kala keenay Jabuuti ,Somaliland iyo Soomaaliyaba oo ay magaaladaasi ku qabsatay macaluul tii ugu darrayd oo aanay qaarkood weligood arag .
4.Waxa lagu bahdilay salaadiintii , hoggaamiye dhaqameedyadii looga yeedhay Somaliland, safarka dheer iyo rafaadkana ku gaadhay magaalada Saylac.
5.Cid kastoo xafladahaasi kala socotay shaashadaha tv-yada ,Jabuuti iyo meelo kaleba waxay ka marag kaceen sida dawladnimada Somaliland loogu baabiiyey dhulkaasi isla markaana cagta hoosteeda loo geliyey wufuuddii kala tegtay degaanada kala duwan ee Somaliland .
6.Xafladda Saylac loogu qabtay Ugaaska B/ciise oo khatargelin gaadhay nabadgelyada degaankaasi kaddib markii ammaanka dhulkaasi gacanta loo geliyey dawladda Jabuuti isla markaan meesha laga fogeeyey ciidamada Somaliland taasina ay kicisay dareenka taliyayaasdha ciidamada Somaliland oo dib iskaga waabiyey shicibkii martida ahaa ee aaminsanaa in degaanka Saylac hoos yimaaddo maamulka Ismaaciil Cumar Geelle balse la tusay inaanay weli degmada Saylac iyo gobolka Selel aanay ahayn daaradda xukuumadda Jabuuti, tallaabadaasina ay soo afjartay maalmo ama wiigag ugaaska iyo martida Jabuuti kasoo kaxaysayba kusii nagaadaan gudaha Somaliland ,iyadoo ra’iisal wasaare Dilate Maxamed Dilayte oo madaxweyne Geelle u metelayey xafladdani soo afjaray caleemosaarkii iyo damaashaadkii ,si degdeg ah jabuuti loogu duuliyey diyaaraddii ay ku yimaaddeen magaalada Saylac.
7.aragtida reer Somaliland iyo waayo aragnimada xafladdaasi ay kasoo qaateen Salaadiinta, Cuqaasha, Maamulayaasha laamaha dawladda iyo masuulyinnmta Somaliland oo wax ka beddelaysa aragtidoodii hore ay uga qabeen xukuumadda Jabuuti iyo xidhiidhka dawladda Somaliland maanta la leedahay inuusan ahayn mid ku salaysan derisnimo wanaag ee ay tahay qabsasho dawladda Jabuuti qabsatay ama laga iibiyey degaanka Saylac .
In kastoo beesha Ciise ka mid tahay beelaha degaanka Somaliland ama gobolkii hore loo odhan jiray Awdal ayaan looga fadhiyin in xaflado noocan oo kala ah oo lagu waxyeelaynayo qarannimada Somaliland iyo dawladnimadooda ay ku qabtaan gudaha dalka kuna dafiraan qarannimada, calanka iyo jiritaanka Somaliland.
Gobolkan Awdal oo isagu ahaa gobolka madaxweyne Rayaale arrimo siyaasadeed iyo kuwa kaleba uga jaray gobolka Selel ayaa madaxdhaqameedii xafladaasi ka tegey la mid ahaayeen martida xafladaasi kaga timid puntland , soomaaliya iyo Itoobiya loona diiday inay xafladaasi ka jeediyaan afkaartii ay la tegeen, xafladaasina ay ku lumiyeen kalsooni xukuumadda madaxweyne Rayaale oo iyadu fasaxday in qarannimada Somaliland lagu dafiro gudaha Somaliland .dii shacbigu ku taageerayey wakhtigii ay ka hadlayeen iibinta jasiiradaha Saacaddiin iyo Ceebaad, balse maanta arrintu dhaaftay labadaa jasiiradood lagana hadlayo aayaha dad iyo dal kusii socda Jeebadda Ismaaciil Cumar Geelle .
Way dhici kartaa in guuldarada Somaliland iyo reer Awdalba kaga dhacday xafladaasi ay qaarkood ku faani doonaan hase yeeshee waxay guud ahaanba xafladdan reer Somaliland badi u arkayeen mid ujeeddooyin fog leh lana arki doono cawaaqibka ka dhasha dardaaran kii Marxuum Cigaal Rayaale kula dardaarmay:
in Ismaaciil Cumar Geelle khatar ku yahay jiritaanka Somaliland , oggolaynna dawlad aan isaga ahayni inay kla shaqayso geeska Afrika , soomaali oo dhanna uu jeebka ku rito.
Ugu dambayntiina xafladda maalinta 1da March Ugaaska Ciise loogu qabtay Saylac ayaa ahayd maalin madow oo baal madow kaga qormi doonta taaiikhda reer Somaliland iyo reer Awdalba.,waxayna dareenadani durba dhirbaaxo kulul ku noqonayaan qaranimada iyo dawladimada Somaliland ,inkastoo malaha xukuumadda Rayaale ku faani doonto waxa ka dhacay halkaasi ee ceebta ku ahayd reer Somaliland .